Ọkụ nke akụkụ iku ume, ire na anya na ụmụ
Ihe ize ndụ na-echere ụmụ anyị n'oge ọ bụla, na mgbe ụfọdụ, anyị enweghị ike ichebe ha site na mmerụ ahụ. Onye okenye ka nwata ahụ na-aghọ, ọ ga-adịrị ya mfe ịchọta asụsụ nkịtị na ya ma kọwaa ihe ga-ekwe omume, ihe a na-apụghị ime, ihe dị mma na ihe na-eyi egwu. Otú ọ dị, mmadụ enweghị ike ịhụ ụzọ ndụ niile, ya mere ọbụna ụmụaka ndị na-erube isi, ndị nwere obi ike na ndị nwere onwe ha na-adaba n'ọnọdụ ndị dị ize ndụ. N'etiti ndị nke ikpeazụ, m ga-achọ ịkpọ oku ọkụ. Ọkụ ahụ ọkụ anaghị adaba na aka, ụkwụ na ahụ: ọkụ anaghị ahọrọ ebe a ga-akụ. Ya mere, n'isiokwu a, m ga-achọ imetụ aka dị mkpa dị ka "ọkụ nke traktị respiratory, ire na anya".
N'ezie, ọ dịghị mkpa ugbu a iji kọwaara gị oke ọkụ nke akụkụ akụkụ iku ume, ire na anya dị ize ndụ - akụkụ ndị a dị oke nro, ya mere, mmetụta nke okpomọkụ dị na ha abụghị ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ na-emenye ụjọ! Ka anyi gbalịa ichebara ihe ndi a nile di iche iche ka ha mata: otu esi enyere nwa gi aka, oburu na ihe ojo adakwasi ya, Chineke egbochi ya.
Ọkụ nke akụkụ iku ume
Kedu ka igwe ikuku si eme? Nke a bụ nnọọ ihe kwere nghọta: nsogbu a na-eyi nwatakịrị egwu ma ọ bụrụ na ọ na-ekpo ọkụ (ikuku). Nke kachasị dị ize ndụ n'echiche a bụ ọkụ na-ere ọkụ n'ime ụlọ, mgbe ụfọdụ, ọkụ dị otú ahụ na-eme n'oge mmebi ma ọ bụ ọbụna na sauna ma ọ bụ saa.
Kedu otu esi achọpụta oke ikuku na ikuku? Nke mbụ, iku ume nke nwatakịrị ahụ na-esi ike, ọ na-arịa ụkwara na ọgụ, olu ya na-ada ụda. Tụkwasị na nke a, nwa ahụ na-enwe mmetụta mgbu mgbe ọ na-amanye mmiri na n'ime obi.
N'ezie, ụdị mgbaàmà ndị ahụ pụkwara igosi ọkụ nke traktị nke iku ume. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha mere na ihe ndị ọzọ: dịka ọmụmaatụ, ọkụ, mmebi, mgbe ịsachara, ọ bụrụ na ọkụ dị na ihu ma ọ bụ n'olu, ọ bụrụ na ajị isi n'olu na imi na-ere ọkụ ma ọ bụ na-egbuchapụ anya anya, ọ pụtara ozugbo na nke a bụ ọkụ.
Ọkụ nke akụkụ iku ume na-adị ize ndụ karịsịa n'ihi na ọ nwere ike ịkpasu mmebi nke mucous ahụ ọkụ. Dịka ị maara, na nke a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikuku iku ume, n'ihi ya, enwere ike ịmalite. I kwesịrị igosi nwa gị ozugbo o kwere omume, ọbụlagodi na ị maghị na ọkụ dị.
Mgbe ị na-eche ka ndị dọkịta bịarute, gaa na ikuku ọhụrụ ma gwa nwa ahụ ka ọ bịa n'ọnọdụ nke ahụ nke ọ na-adịrị ya mfe na, ma, nke ka nke, iku ume. Nwa ah u ekwes igh i ikwur ita okwu, i hap ugh i ya nke ab uo.
O siri ike iche na ọkụ dị otú ahụ na-eme mgbe mmiri dị ọkụ ma ọ bụ nri na-abata n'ọnụ gị.
Kedu ihe ị chọrọ ime nke ọma mgbe nwa ahụ gasịrị? Tipụ otu: ị ga-edozi ebe mebiri emebi ozugbo. Otú ọ dị, ụzọ kachasị mfe bụ iji mee ka mmiri dị jụụ: ma ọ bụ pịa ya kpọmkwem na ọnụ gị ma jide ya, gbasaa ya, ma ọ bụ tinyekwa ire n'okpuru iyi iyi mmiri. Ị nwekwara ike ịnweta ice cube site na friza ma ọ bụ breeze jupụtara na mmiri ma na-ata ha. Ụzọ kachasị mma maka nwatakịrị iji mee ka ire dị jụụ bụ ice cream, nke a ga-agba ya ọkụ ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na ị chebere gel na ị na-ekpuchi nwa nwa, mgbe ezé ya gbawara - i nwere ike iji ya.
Nwatakịrị nwere ike ịnweta ọkụ nke anya nwatakịrị ma ọ bụrụ na ihe ọkụ na-ekpo ọkụ n'anya ya (dịka ọmụmaatụ, mmiri esi mmiri, ma ọ bụ nkedo mmanụ na-ekpo ọkụ site na pan frying), ma ọ bụ anya na-akpọtụrụ ihe dị ọkụ (ọkụ, sịga) ozugbo.
Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ ọkụ, enwere ohere na ihe nile ga-arụ ọrụ, nke a agaghị emerụ ahụ ike nke nwa ahụ n'ozuzu ya, mgbe ahụ ọkụ ọkụ nke anya na-adị njọ mgbe niile, n'ihi ya ị gaghị egbu oge na nlekọta ahụike.
Kedu ihe bụ isi ihe ịrịba ama na nwa ahụ nwere ọkụ ọkụ?
1) ọ na-enwe oké ihe mgbu;
2) anya mmiri si na anya;
3) nwa ahụ na-amalite iyi egwu nke ìhè;
4) o yiri ka nwa ewu na ihe dịgidere n'anya ya;
5) eyelids na ebe nke akpụkpọ ahụ na-ahụ anya na-ata ahụhụ site na ọkụ;
6) na cilia nke nwa na-ehi ụra.
Ihe kachasị na azụmahịa a bụ oge kwesịrị ekwesị na enyemaka zuru oke, nke ị ga-enye ozugbo o kwere omume mgbe ị na-eche ụgbọ ala.
Ọ dị mkpa, dị ka a na-eme na ọkụ ndị ọzọ, iji mee ka mmiri dị jụụ ebe ahụ mebiri emebi. E nwere ọtụtụ nuances dị mkpa:
- I kwesiri ka o mee nke oma, ma jiri nwayo meghee anya na oku, na-agbanye nku anya ya na mkpịsị aka e ji kechie ya na bandaji;
- oke mmiri kwesịrị ịdị na-aga n'ihu n'ime ogo 12-18;
- kpoo anya anya maka nkeji iri abụọ;
- Ị nwere ike ịsacha na karama site na ịwụsa mmiri n'ime pear ma ọ bụ sirinji (mgbe wepụsịrị agịga, n'ezie) ma ọ bụ kwụ ọtọ site na mgbata (saa);
- na - eme ka onye na - enweghị ntụsara ahụ na - esi na mbido - na n'ime;
- Ọzọkwa, ọ kachasị mma iji mmiri na-agba mmiri, ma ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, ị ga-anakọta mmiri na pelvis ma tinye ihu gị n'ebe ahụ, mgbe ị na-arịọ nwa ahụ ka ọ na-egbu oge.
1. Mgbe usoro a gasịrị, kpochapụ anya ndị nwere anya na ngwọta nke antiseptic, nke e mere maka maka anya.
2. Na-ekpuchi anya nwatakịrị ya na ákwà dị ọcha (ákwà kwesịrị ịdị na-edozi ahụ).
3. Na-elezi anya eyelids na akpụkpọ anụ gburugburu anya, na-eji ọgwụ ndị dị n'ógbè ahụ na-egbu ha.
Echefula ihe gbasara ịsacha mmiri ahụ, ọ bụrụgodị na ọ dị gị ka ọkụ ahụ adịghị ike - ma ọ dị mkpa iji mmiri kpuchie ya!
N'ihe gbasara mgbaàmà ndị na-egosi na ọ dị gị mkpa igosi dọkịta ahụ merụrụ ahụ ozugbo, mgbe ahụ, m ga - achọ ịkwụsị uche gị na ihe ndị a:
- a na-ebelata nwa nke anya nke nwa ahụ, dulled;
- Ihe kariri awa iri abuo na abuo mgbe a natara oku ahu, nwata ahu na-eme mkpesa na o chere na ihe ozo di n'anya ya;
- ọ bụghị nanị na mgbu ahụ na-agafe n'ụbọchị, mana ọ na-aghọwanye ihe a na-apụghị izere ezere;
- na mberede, e nwere ihe ịrịba ama ndị na-eso mmepe nke ọrịa anya (anya na-acha aza ma na-acha ọbara ọbara, purulent imi dị na ya).
Kpachara anya ma kụziere ụmụ gị ka ha na-elekọta mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, n'ihi na ha nwere ike imerụ ahụike ahụ!
Nlekọta anụ maka nwa
Kedu ka esi eme ka nwatakiri rao ura n'enweghi oke?
Kedu ka esi emeso dysbacteriosis na nwa ọhụrụ?
Anemia na-edoghị ahụ na ụmụntakịrị
Ọgwụgwọ nke ụmụaka arama site na ndiife ịgba akwụkwọ
Awa ole ka nwata ga-ehi ụra
Maka ihe ize ndụ nke ịṅụ sịga maka ụmụ akwụkwọ
Kedu ihe obi ụtọ nwanyị ahụ?
Akpọ oku maka April maka akara zodiac
Ọnwụ nke nne: nkọwa dịka egwu dị ka nrọ n'onwe ya?
Nne nne na-ahapụ ezumike nne na nna
Kedu ihe ịrịba ama nke zodiac ga-ahụ ịhụnanya na 2018 Nkịta
Na-aṅụ mmiri ara ehi na caramel na ude cheese
Salad si osikapa ohia
Ihe niile banyere agba agba ejiji n'oge a na oyi
Esemokwu dị iche iche maka nkwadebe ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ maka ụlọ akwụkwọ
Inverted ube achịcha na saffron
Mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ ibe gị
Ejiri apple pie na caramel
Ịhịa aka n'ahụ, agụmakwụkwọ anụ ahụ maka ụmụ akwụkwọ
Ugbo na garlic ihendori
Ogo mmiri ozuzo asa a na-ere maka oge okpomọkụ
Ịhapụ ọrụ na ụzọ udo